Zimbabwe leader blames West's sanctions for late salaries | Daily Mail Online
A supporter of Zimbabwean President Robert Mugabe waits for him to arrive at a rally in Bindura about 100 kilometres north east of Harare, Friday, July 8, 2016. Mugabe on Friday blamed sanctions imposed by Western countries for his government's failure to pay salaries on time, in his first public comments after a week of unrest across the county. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President, Robert Mugabe, addresses party supporters at a rally in Bindura about 100 kilometers north east of Harare, Friday, July 8, 2016. In his first comments since government workers boycotted work earlier in the week, Mugabe said the salary delays were temporary, adding that striking government workers were ignorant of the country's history. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Supporters of Zimbabwean President Robert Mugabe wait for him to arrive at a rally in Bindura about 100 kilometres north east of Harare, Friday, July 8, 2016. Mugabe on Friday blamed sanctions imposed by Western countries for his government's failure to pay salaries on time, in his first public comments after a week of unrest across the county. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A supporter of Zimbabwean President Robert Mugabe waves a flag with his portrait at a rally in Bindura about 100 kilometres north east of Harare, Friday, July 8, 2016. Mugabe on Friday blamed sanctions imposed by Western countries for his government's failure to pay salaries on time, in his first public comments after a week of unrest across the county. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
A supporter of Zimbabwean President, Robert Mugabe's party shows his allegiance at a rally in Bindura about 100 kilometres north east of Harare, Friday, July 8, 2016.In his first comments since government workers boycotted work earlier in the week, Mugabe said the salary delays were temporary, adding that striking government workers were ignorant of the country's history. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
Zimbabwean President, Robert Mugabe, addresses party supporters at a rally in Bindura about 100 kilometres north east of Harare, Friday, July 8, 2016.In his first comments since government workers boycotted work earlier in the week, Mugabe said the salary delays were temporary, adding that striking government workers were ignorant of the country's history. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)